4 furaha arooska kaamil ah | Bezzia
4 furayaasha arooska kaamil ah
Maria vazquez | 08/09/2021 10:00 | Aroosyada
Maxay lagama maarmaan u tahay in aroosku noqdo mid kaamil ah? Waxaa jira waxyaabo badan oo la go'aaminayo, dad aad u badan oo lala xiriirayo, in aan qofna la yaabin in dad badan ay shaqaaleysiiyaan adeegyada shirkad. khabiir ku ah qorshaynta arooska ama qorsheeyaha arooska.
Mid ka mid ah furayaasha dabbaaldegga arooska kaamil ah waa lilaali urur taxaddar leh mid kasta oo ka mid ah diyaarinta. Sababtoo ah marka laga reebo rabitaanka iyo xamaasadda, waxaa jira sifooyin kale oo lagama maarmaan u ah in la wajaho shaqadii hore sida dulqaadka iyo abaabulka. Waxaa jira furayaal yar oo loogu talagalay aroos kaamil ah iyo kuwo badan oo isku mar ah.
1 Laxanka wanaagsan
2 Meesha saxda ah
4 Martida arooska
Urur wanaagsan ayaa fure u ah si maalinta aroosku u timaaddo wax walba waxay u shaqeeyaan sida mashiinno saliid leh oo qumman. In martidu aysan ku sugin goobta xafladda waqti aad u dheer si ay aroosadda iyo aroosadu u yimaadaan, inay ogaadaan meesha ay tahay inay tagaan mar walba, inaanay jirin waqti badan oo sugitaan oo u dhexeeya taarikada ama in mar xafladda ama dabbaaldegga qof walba guriga ayuu ku heli karaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah wuxuu fure u yahay aroos kaamil ah.
Waxaa jira waxyaabo badan oo lagu xisaabtamo wayna adag tahay in lagu nasto arooska oo lagu raaxeysto haddii ay tahay inaad ka warqabto dhammaan waxyaabahaas qofka kowaad. Sidaa darteed, dad aad u tiro badan ayaa sharad ku galaya wakiilashada iyo lahaanshaha qof khabiir ku ah ururka agtaada maalin muhiim u ah tan oo kale. Way fududahay in la fahmo, sax?
Meesha saxda ah
Xagee ka dhacayaa arooska? Kani waa mid ka mid ah go'aamada ugu muhiimsan in arooska iyo aroosaddu ay wajahaan. Lammaanayaasha sida caadiga ah way iska caddahay nooca xafladda ay rabaan, ha noqoto arooska madaniga ah ama aroos diini ah, laakiin aad uma badna halka ay rabaan inay ku xusaan tan iyo xafladda dambe.
Illaa dhawr sano ka hor, go'aankani wuu sahlanaa. Xafladaha ayaa laga yareeyay maxkamadda oo loo rogay kaniisadda waxaana guud ahaan xafladaha lagu qaban jiray hoteello waaweyn iyo maqaayado. Maanta, si kastaba ha ahaatee, suurogalnimadu waa mid aan dhammaad lahayn: beero, guryo beero, beero…. dhammaantood waa la heli karaa lamaanaha arooska.
Ujeedadu waa in sharad lagu galo meel bannaan oo qof walba dareemi karo raaxo; labadeenaba saaxiib iyo marti. Maxaan ku fahamnaa raaxo? Ha dareemin in aad meesha ka maqan tahay ama aad ha isku mashquulin; ka dhig meel dareensiisa isla markaaba deganaansho.
Sidoo kale, haddii meel aan la heli karin ku filan, waa inaan martideenna siinnaa dariiqa aan ku tagi karno. Shaqaalee adeegga baska oo marka hore martida u kaxayn kara xafladda ka dibna, dhammaadka xafladda, guryahooda.
Faahfaahintu aad bay muhiim u tahay waxayna beddeli kartaa meel. Ubaxyada iyo iftiiminta ayaa laga yaabaa inay yihiin labada ugu muhiimsan marka laga hadlayo qurxinta arooska. Labaduba waxay leeyihiin awood ka dhig meel bannaan oo soo dhaweyn iyo soo jiidasho leh.
Ubaxa waa lama huraan miiska. Sida habboon, isku qas xarumaha hoose iyo kuwa sare si aad u bixiso dhaqdhaqaaq; Tan waxaa ku taliya kuwa fahansan farshaxankan. Oo haddii miisaaniyaddu adag tahay, waxaad had iyo jeer ku beddeli kartaa ubaxa caleemo cagaaran.
Iftiimintu waa furaha, marka lagu daro samaynta meel bannaan oo soo dhaweyn iyo soo jiidasho leh, si loogu waafajiyo saacadaha kala duwan ee maalinta. Iftiimin fiican ayaa iyaduna muhiim u ah soo qaado sawirro wanaagsan. Oo weliba waa cunsur amni. Haddii xafladdu ay tahay habeen, waa inaan hubinnaa in martidu ay helaan dhammaan waddooyinka iftiimay.
Arooska, martidu waa mudnaanta koowaad. Waa inay dareemaan raaxo mar walba, inay ogaadaan meesha ay aadaan, sida iyo goorta ay halkaas tagayaan. Intaa waxaa dheer, waa inaan siino, intii suurtogal ah, macluumaadka ku saabsan magaalada kuwa safraya iyo, sidaan horeba u soo sheegnay, dariiqyada lagu tago ama looga baxo arooska haddii aysan meeshan ahayn meel la heli karo.
Haddii aad sidoo kale rabto inaad hesho faahfaahinta martida Waxa ugu fiican ayaa ah in sharad lagu sameeyo wax la taaban karo oo ay ku isticmaali doonaan arooska ama guriga. Waxaan ka hadleynaa espadrilles, taageereyaasha, dahaarka, garbasaarrada ... iyadoo ku xiran xilliga aad guursaneyso, mid ama midka kale ayaa aad u guuleysan doona.
Mar walba waxaan ka hadalnaa martida waana sidaas si fiican u dooro martida una oggolow inay ku raaxaystaan Waa mid ka mid ah furayaasha ugu muhiimsan arooska kaamil ah. Markaan doorano si wanaagsan waxaan ula jeednaa inaan ku marti qaadno kuwa aan ku dareemi karno raaxo. Aroosku wuxuu noqonayaa maalin muhiim ah, qurux badan laakiin aad u walwalsan, sidaa darteed waxaa wanaagsan in si fiican loo hareereeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » Aroosyada » 4 furayaasha arooska kaamil ah
Isbeddellada waaweyn ee midabada timaha dayrtaan
Caadooyinka caawiya xoojinta lammaanaha